Yiba Uchwepheshe Wezokumaketha Komphakathi | Martech Zone
Yiba Uchwepheshe Wezokumaketha Komphakathi
NgoLwesithathu, Januwari 1, 2014 NgoLwesithathu, Januwari 1, 2014 Douglas Karr
Bengifuna ukwabelana ngale infographic ngenxa yebhalansi enkulu enayo yokwethula amakhono adingekayo ukuze umakethi akwazi ukusebenzisa amasu wokumaketha ezokuxhum ngempumelelo. Ngokubona kwami, mina uqobo angangeluleka noma yimuphi umfundi noma uchwepheshe ukuthi ahambe indlela yokuba nekhono kwezokuxhumana. Imithombo yezokuxhumana iyisiteshi esisodwa secebo lokukhangisa jikelele. Kufanele ngabe usebenza ukuze ube Uchwepheshe Wezokumaketha ngala makghono - kanye nokuqonda ukuthi kungena kanjani kucebo lenkampani lokukhangisa online.
Amabhizinisi aya ngokuya ethanda imithombo yezokuxhumana ukufaka imikhiqizo yawo ngokuxhumana nezethameli nokwabelana ngokuqukethwe okufundisayo, okujabulisa abantu, nokukhanyisayo. Kepha wake wazibuza ukuthi ngubani obangela lawo ma-akhawunti kuleli zwe elisha elinesibindi lokumaketha imithombo yezokuxhumana? I-infographic engezansi izobheka izangoma zokumaketha ezingemuva kwekhethini laleli zwe elibonakalayo, izindlela ezingahle ziqonde emsebenzini wokukhangisa ngemidiya yezokuxhumana, nokuthi umbono wangempela womhlaba ungaba yini kulaba bakhangisi abonakalayo. I-infographic nge Izikole.com
Tags: Imfundoizikoleizikole.comingcwethi kwezokumaketha ezokuxhumanaingcwethi kwezokumaketha ezokuxhumana
Iminyaka Emisha Ekhethekile - Izinkulungwane Zemifanekiso ye $ 9.95!
Jan 8, 2014 ku-10: 14 AM
Ngiyabonga, Douglas, ngalesi siqephu esiwusizo. Kuyisikhumbuzo esiwusizo sokuthi zingaki izici ezinendlela ephelele yokumaketha imithombo yezokuxhumana, ingasaphathwa eyokumaketha ngokujwayelekile kulezi zinsuku.